:Bọchị: February 7, 2020
Ọnụ ego dị ọnụ maka pusi na Nri Dog
Abụ anụ ụlọ dị ezigbo mkpa n'ihe banyere ikesa mmetụta nke ndị ọ hụrụ n'anya. Echiche nke ihe ọ bụla dị ndụ bụ ihe bara uru na-etolite nkọwa nke ịnweta anụ ụlọ. Agbanyeghị, oke zuru oke maka inye ihe ndị ae kere eke ezigbo ọnọdụ [More ...]
Ndi Ife Anyi Nwere Nkwado Ndi Ife ..! Tarif Ọhụrụ Na-amalite Mọnde
UK UK ekpebiela imezigharị ọnụahịa ọhụụ n'ihi mmụba dị ukwuu na ụgwọ a na-akwụ ụgwọ njem ụgbọ njem ọha na-agbanwebeghị ihe dị ka afọ 3. N'ime tarifu ọhụrụ a ga-etinye n'ọrụ na Mọnde, Febụwarị 10; tiketi elektrọnik zuru ezu [More ...]
Ndị ọbịa bịara zmir Çamlık Steam Locomotive Museum
Turkey nanị ihe ngosi nka nke bụ otu n'ime Europe si eduga locomotive na a uzuoku locomotive ngosi nka dị na obodo nta nke Selçuk district nke İzmir summerhouse agbakọtalarị anụ ụlọ na ndị mba ọzọ ndị njem nleta. Çamlık dị na Selçuk nke İzmir [More ...]
Na Jenụwarị 17, 2020, ndị nkuzi ụlọ akwụkwọ nkeonwe bidoro iziga akwụkwọ mkpesa ha na mpaghara obodo ukwu dị na Ankara na Izmir, na oku nke Schoollọ Akwụkwọ Onye Nkụzi Solidarity Network. [More ...]
Obodo Ordu mepere emepe, nke bụ ọsụ ụzọ nke ọrụ ga-ewetara ọhụụ n'obodo ahụ, bute "Atatürk Park Sea Star" nke dị n'agbata ụlọ ọrụ Midi Restaurant na Teleferik Sub Station iji mee ka mpaghara ala dị oke ọnụ ahịa. [More ...]
Ndị ụlọ ọrụ ndị India na-ahụ maka ya bụ Larsen na Toubro (L&T) Etihat Rail nwetara nnukwu mmezi. Etihad Rail, ụlọ ọrụ gọọmentị nke United Arab Emirates na-achịkwa ụgbọ njem na-ebu ibu na ndị njem [More ...]
Ọ nwere mmụba ọ bụla na ụgwọ Marmaray?
Iji bulie ụgbọ elu nke dị mkpụmkpụ karịa site na 2.60 TL ruo 3.50 TL na bọs ọha nkeonwe, IETT, metrobus na tarro na nnọkọ ụgbọ njem na-enwe ebe a na-enwe ọgbakọ Nnọkọ Njikọ Ọdachi nke Obodo Obodo Istanbul. [More ...]
Ndi oria njem nke ndi oria na obodo Konya
Obodo Konya na - arụ ọrụ na - emebi ihe n'ụgbọ njem ọha na - ebu puku kwuru puku ndị mmadụ kwa ụbọchị. Affilitù ndị otu na Konya Metropolitan Ngalaba Nchedo na Mgbakọ gburugburu obodo, ụba nje na ọrịa na-efe efe [More ...]
Ejiri igwefoto dekọọ ihe ọghọm ndị metụtara trams na-agba n'okporo ụzọ Ba .cılar Kabataş. Msgbọ ala na-ejere ọtụtụ puku mmadụ ozi kwa ụbọchị nwere ike nwee ihe ọghọm site n'oge ruo n'oge. Oge ụfọdụ trams na-adabasị na ụgbọala mgbe ụfọdụ [More ...]
35 Emebela mkpebi siri ike na Hike na Istanbul
Ndị otu ụlọ ọrụ nke ndị ọrụ aka na Artisans na Istanbul kwupụtara na e mere mkpebi ịkwụ ụgwọ pasent 35 na Istanbul. A na-atụ anya ka igwe hie a ga-abata n’ọrụ mgbe mbinye aka nke ndị ọka iwu dị mkpa. Njikota Transportgbọ njem na ebe a na - eme ihe nhụjuanya nke obodo Metropolitan nke Istanbul [More ...]
Maka ndị na-achọ ọrụ na Eskisehir, Estram Light Rail Systems Transportation Inc., otu n'ime ndị na - emekọrịta ihe na Obodo Metropolitan site na İŞKUR. Ebiputara 48 na mgbasa ozi mbanye. Dabere na nkwupụta ahụ, ọ dịkarịa ala afọ 1 nwere ahụmịhe [More ...]
Nkwado sitere na Dahaoğlu maka Alanya Antalya Rail System Project
Erkan Yağcı, Onye Isi oche nke Union of Mediterranean Touristic Hoteliers, tụrụ aro ka ịgbanwee gaa usoro ụgbọ okporo ígwè dị n'etiti Alanya na Antalya ka ndị njem wee nwee ike ịhapụ ụlọ oriri ha wee gbadaa na etiti obodo. Onye Alanya Tourism Development Foundation (ALTAV) Onye isi ala, na-enyocha atụmatụ Yağcı [More ...]
Kocaelispor Derincespor Flima ndị ọzọ sitere na City Park maka Derby
Kocaeli Metropolitan Municipality TransportationPark ga-ahazi njem ọzọ maka egwuregwu obodo ahụ ebe Kocaelispor na Belediye Derincespor ga-eche ihu na Kocaeli Stadium na Sọnde, 9 February na 13.30. Ibu njem site na KÖRFEZ tinyere 150 KS [More ...]